Ebe a na-asacha mmiri na-ekpo ọkụ na-adaba adaba maka iji ya mee ihe n'otu oge, na-eme ka mmiri dị ọkụ dị n'etiti ogo 15.7-37.8. Usoro a na-eji nnukwu tankị nchekwa, na-enye mmiri nke 71 gal / min, nke nwere ike inye mmiri maka otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwaọrụ anya, hụ na oge oriri mmiri karịrị 15 nkeji.
Ejiri ígwè na osisi mee ngwaọrụ ahụ, dabara maka ime ụlọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. A na-agwakọta mmiri ọkụ na mmiri oyi site na ngwaọrụ ọkụ ọkụ eletrik, wee nye ya onye na-asacha anya maka ojiji. Ngwaahịa a kwekọrọ na ihe nrịbama nke mmiri mmiri nke anya anya nke akọwapụtara na ọkọlọtọ anya US ANSI Z358-1 2014. Enwere ike iji ya n'oge oyi, mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mmiri na-ekpo ọkụ: ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ mmiri ọkụ, mgbapụta mgbapụta, mgbapụta mgbapụta, igwekota na-ekpo ọkụ na oyi.
Nka na ụzụ atụmatụ:
Storagelọ nchekwa mmiri na-ekpo ọkụ eletrik na-enye mmiri ọkụ na mmiri oyi iji mee ka mmiri dị ọkụ nke nkuanya kwekọọ na ọkọlọtọ anya ANSI Z358-1 2014. Ejiri igwe eletrik na-ekpo ọkụ ọkụ eletrik iji kpoo mmiri mmiri, na onye na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ nke isi iyi mmiri mmiri iji gbochie ihe omume nke ikpo oke ọkụ nke mmiri. Onye na-ekpo ọkụ ọkụ na mmiri oyi na-achịkwa mmiri ọkụ mmiri ọpụpụ nke nku anya. Enwere ike ịtọpụta mmiri mmiri ọkụ nke igwe ọkụ na mmiri ọkụ dị ka ọnọdụ ihu igwe dị n'ọhịa n'oge oyi. Enwere ike ịnye igwe ma ọ bụ ọtụtụ anya eji eme ihe maka ojiji.
Ihe eletriki eletriki n'ime sistemụ bụ nke na-egosi mgbawa, nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ ebe mgbawa. Ejikọtara usoro ahụ na ngwaọrụ nke ụlọ nchịkwa izugbe. Ozugbo ejiri anya anya na saịtị, enwere ike inye mgbaàmà mgba ọkụ na ụlọ njikwa izugbe. Ejiri ngwa sistemụ nke nwere mkpuchi mgba ọkụ na-agbawa agbawa na ọkụ na-agbawa agbawa.
Modelkpụrụ isi: 0209-10968
0209-1097: A gbanwere nhazi nke ịwụ mmiri na-adabere n'ụdị nke isi
0209-1098: Dabere na isi ihe nlereanya, a gbanwere ya na ụdị igbe dị n'èzí
0209-1099: Na-adabere n'ụkpụrụ bụ isi, a na-akwalite ya na nchekwa tankị na-ekpo ọkụ eletrik na mmiri agwakọta nke mmiri oyi na mmiri ọkụ.
Nke gara aga: Akwa ngwaọrụ anya
Osote: Aha ncha